ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ NLD | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ NLD
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးပါ NLD
Posted by koaung on Mar 27, 2010 in Other - Non Channelized | 1 comment
အခုတလော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ရဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေး မတင်ရေးဟာ ပြည်သူတွေကြားမှာစိတ်ဝင်စားနေကြတဲ့ ကိစ္စရပ်လေးတခု ဖြစ်နေပါတယ်။ NLD ကတော့ အန်တီစု ရဲ့ သဘောထားအတိုင်း လာမဲ့ ၂၉ ၇က်နေ့ကျမှ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် နဲ့ ဈေးတွေမှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သာ ၀င်ပြိုင်ရင် ဒို့ကတော့ NLD ကိုပဲ မဲပေးမှာပဲတော်ရေ့ ဆိုတဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ အသံ အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ အသံ နဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ပြန်ရင်လည်း လူ ၅ ယောက်ထိုင်နေတဲ့ ၀ိုင်းမှာဆိုရင် လူ ၄ ယောက်လောက်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲ မဲပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း နဲ့ ၁၉၉၀ မှာတုန်းကလဲ NLD ကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ အခု ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD သာ ၀င်ပြိုင်ရင် NLD ကိုပဲ ပေးမယ် တခြားပါတီတွေက အခုမှ ကြားဘူးတဲ့ နာမည်တွေ သိလဲမသိဘူး ဟု ပြောဆိုကြတဲ့အသံများဟာ မကြားချင်မှအဆုံး ကြားနေရပါတယ်။
ဒါကလဲ ဘာကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုပဲ တမ်းတမ်းစွဲဖြစ်နေရတာလဲဆိုရင် NLD ဆိုတာက ၁၉၉၀ ကတည်းက ပြည်သူတွေရင်ထဲမှာ စွဲလမ်းခဲ့တဲ့ နာမည်ဖြစ်နေတာရယ် နှစ်ပေါင်း ၂၀ လောက် ဒီနာမည်က မသေပဲ ပြည်သူတွေကြားမှာ ရပ်တည်နေခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ ပြည်သူတွေဟာ NLD ဘက်မှာ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းပါတယ်။ NLD အနေနဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မသိကျိုးကျွန်ပြုမယ်လို့တော့ မထင်ပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့ ပါတီတွေအနေနဲ့ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲအရပေါ်ပေါက်လာမယ့် လွှတ်တော်အသီးသီးမှာ ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်ခံ ကိုယ်စာလှယ်က တစ်ရာမှာ(၇၅)ဦးရှိနေတာမို့ အနာဂတ်နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်က အထက်စီးက ရှိမနေ ပါဘူး။ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းစတာတွေကို ဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ဆောင်လို့ရပါသေးတယ်။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုကို ရောက်အောင်သွားကြည့်မှ အဆင်ပြေတာတွေ၊ မပြေတာတွေသိရမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်လျှောက်လှမ်းကြည့်မှ အကျိုးနဲ့ အပြစ် ခွဲခြားသိမြင်ပြီး လိုတိုးပိုလျော့လုပ်လို့ရနိုင်မှာပါ။
ဒီနှစ်ထဲမှာကျင်းပမဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ သတ္တိရှိရှိဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်၊ အရွေးခံရရင် အစိုးရဖွဲ့ပြီး မိမိတို့ဖြစ်ချင်တာတွေ ဖြစ်အောင်လုပ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ဘဲ တယောက်နဲ့တယောက် အချင်းများပြီး ဝေဖန်နေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေရင်တော့ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကြားနေရတဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေရဲ့ သဘာထားကွဲလွဲမှုတွေဟာ နောင်တချိန်မှာ နောင်တရစရာတွေဖြစ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကိုယ်မကြိုက်ပေမဲ့အများကလက်ခံတာမျိုးရှိနေရင် လက်ခံသင့်ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ပြောင်းလဲလို့ရအောင်လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့သလို ၂၅% နဲ့ ၇၅ % ဆိုတာ အချို့အားဖြင့်ကွာခြားပါတယ်။
ဒေါ်စုမပါလို့ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်တော့ဘူး။ အတိုက်အခံဘ၀နဲ့ပဲ နေတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်လဲ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်းမှာ လူထုဆူပူအုံကြွမှုကိုရအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင်လဲ စီးပွားရေးသမားတွေကို အကျိုးပြုသလို တောကြောင်တွေပဲ စီးပွားဖြစ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ပြည်သူတွေကတော့ ကျွဲနှစ်ကောင်ကြားမှာ မြေဇာပင် ဖြစ်ရပါလိမ့်အုံးမယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲကြည့်ကြည့် ရွေးကောက်ပွဲကို အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပေးသွားတာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲဟာ တရားဝင်တယ် မ၀င်ဘူးဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိ မဲပေးပိုင့်ခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်သူတွေကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ အင်အားပြည့်ရှိနေပြီး မဲပေးဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေကြကြောင်းပါ။
Are you blindful oracollaborator with junta? The issue is not how voters would be able to vote. Junta proved their determination to hold the power by 2008 sham constitution. Would you argue that it was approved by the majority of voters? Come on, don’t get dreaming. Everyone knows junta want the ligitimacy from this election for holding power forever.